[အခန်းဆက်] ဂျပန်အစားအစာများကမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တကယ်ပဲအရသာရှိရဲ့လား? | yathar Magazine
နိုဝငျဘာ 16, 2019
TOKYO ODEN BOYS ရဲ့ မျက်မှန်စူရှီ ပါဗျ။
အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ခြိုက်လာတဲ့ကျွန်တော်ကဒီလကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူအဖြစ်yathar Magazineမှာအခန်းဆက်ရေးသားဖော်ပြရာတွင်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ???
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျပန်အစားအစာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် ! ! !
ဂျပန်လူမျိုး : “ကြည့်စမ်း…လတ်ဆတ်တဲ့ဆူရှီတွေ! ! ဒီလိုမျိုးစားရခဲတယ်~? (၀ိုးးးဟိုးးးးးး)”
မြန်မာလူမျိုး : “ ဟုတ်၊ ဟုတ်ကဲ့ …..(အသားစိမ်းတွေမကြိုက်ဘူး….)
ဂျပန်လူမျိုး : “ဂျပန်လူမျိုးတွေကအစားကောင်းကြိုက်သူတွေပါ! အားလုံးအရသာရှိတယ်မလား~? (ဟူးးးးးးးး)”
မြန်မာလူမျိုး : “ဟုတ်၊ ဟုတ်ကဲ့ ……(အရသာပေါ့လိုက်တာ)။”
ဂျပန်လူမျိုး : “ဒီမှာဈေးကြီးတယ်ဗျ~! တော်ပါသေးရဲ့ ~!”
မြန်မာလူမျိုး : “ဟုတ်၊ ဟုတ်ကဲ့…..(လိုက်ကျွေးမယ့်စရိတ်မုန့်ဖိုးပေးလိုက်တာမှပိုကောင်းအုန်းမယ်)”
ကမ္ဘာကျော်ဆူရှီစားဖိုမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ “ထမင်းချက်၃နှစ်ထမင်းလိပ်၈နှစ်” ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်၊ ဆူရှီထမင်းကိုအကောင်းဆုံးချက်တတ်ဖို့အချိန်(၃)နှစ်ကြာမြင့်ပြီးအရသာရှိရှိဆူရှီလိပ်နိုင်ဖို့ကိုအချိန်(၈)နှစ်မျှယူရတယ်လို့ပြောတာကြားဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်မျက်မှန်ဆူရှီလစဉ်ရေးသားတာကိုဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ကြိမ်းသေသင်သဘောကျနှစ်သက်မယ့်ဆိုင်ကိုတွေ့ရှိမယ်လို့“မျက်မှန်”ယုံကြည်ပါတယ်! (မျက်မှန်ဆူရှီက! (စတိုင်ကျတယ်ဟုတ်!))
TOKYO ODEN BOYS ရဲ့ မကျြမှနျဆူရှီ ပါဗြ။
အဲ့ဒီလိုမွနျမာနိုငျငံကိုနှဈခွိုကျလာတဲ့ကြှနျတျောကဒီလကစပွီးမွနျမာနိုငျငံ၏ဖြျောဖွတေငျဆကျသူအဖွဈyathar Magazineမှာအခနျးဆကျရေးသားဖျောပွရာတှငျပါဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ???
မွနျမာနိုငျငံမှာဖှငျ့လှဈထားတဲ့ဂပြနျအစားအစာအကွောငျးအရာဖွဈပါတယျ ! ! !
ဂပြနျလူမြိုး : “ကွညျ့စမျး…လတျဆတျတဲ့ဆူရှီတှေ! ! ဒီလိုမြိုးစားရခဲတယျ~? (ဝိုးးးဟိုးးးးးး)”
မွနျမာလူမြိုး : “ ဟုတျ၊ ဟုတျကဲ့ …..(အသားစိမျးတှမေကွိုကျဘူး….)
ဂပြနျလူမြိုး : “ဂပြနျလူမြိုးတှကေအစားကောငျးကွိုကျသူတှပေါ! အားလုံးအရသာရှိတယျမလား~? (ဟူးးးးးးးး)”
မွနျမာလူမြိုး : “ဟုတျ၊ ဟုတျကဲ့ ……(အရသာပေါ့လိုကျတာ)။”
ဂပြနျလူမြိုး : “ဒီမှာဈေးကွီးတယျဗြ~! တျောပါသေးရဲ့ ~!”
မွနျမာလူမြိုး : “ဟုတျ၊ ဟုတျကဲ့…..(လိုကျကြှေးမယျ့စရိတျမုနျ့ဖိုးပေးလိုကျတာမှပိုကောငျးအုနျးမယျ)”
ကမ်ဘာကြျောဆူရှီစားဖိုမှူးတဈယောကျဖွဈဖို့ “ထမငျးခကျြ၃နှဈထမငျးလိပျ၈နှဈ” ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယျ၊ ဆူရှီထမငျးကိုအကောငျးဆုံးခကျြတတျဖို့အခြိနျ(၃)နှဈကွာမွငျ့ပွီးအရသာရှိရှိဆူရှီလိပျနိုငျဖို့ကိုအခြိနျ(၈)နှဈမြှယူရတယျလို့ပွောတာကွားဖူးပါတယျ။
ကြှနျတျောမကျြမှနျဆူရှီလစဉျရေးသားတာကိုဖတျရှုမယျဆိုရငျကွိမျးသသေငျသဘောကနြှဈသကျမယျ့ဆိုငျကိုတှရှေိ့မယျလို့“မကျြမှနျ”ယုံကွညျပါတယျ! (မကျြမှနျဆူရှီက! (စတိုငျကတြယျဟုတျ!))